आत्मानुशासन नै कोरोनाको औषधि « Mero LifeStyle
सरिता थारू	|| 22 May, 2021
कोरोनाको दोस्रो लहरले अधिकांश जिल्लाहरु निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य नागरिकदेखि सेलिब्रेटी छवि बनाएका व्यक्तिहरुमा समेत परेको छ । अधिकांश समयमा व्यस्त रहने कलाकार पनि घरमै बस्न बाध्य छन् । निषेधाज्ञामा घरमै बसेर कसरी दिन बिताइरहेका छन् त ? यसै सन्दर्भमा गायक महेश काफ्लेसँग मेरो लाइफस्टाइलले गरेको कुराकानीः
निषेधाज्ञामा कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ ?
गीत सुनेर, फिल्महरु हेरेर समय बितेको छ ।
कोरोना संक्रमणदेखि कतिको डर लागेको छ ?
डर लाग्छ सबैलाई कोरोना भएको सुनिन्छ । कोरोना संंक्रमणले मर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै छ । त्यसैले परिवार र साथीभाईको चिन्ता लाग्छ ।
संक्रमणबाट बच्नका लागि कस्तो उपाय अपाउनु भएको छ ?
घर बाहिर निस्केको र कसैलाई भेटेको छैन । निषेधाज्ञाको पूर्ण रुपमा पालना गरेको छु । अतिआवश्यक काममा बाहिर निस्किन पर्यो भने मास्क, स्यानिटाइजर, सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरेको छु ।
कोरोनाबाट बच्न तपाईंको सुझाव के छ ?
कोरोनाबाट बच्नका लागि आत्मानुशासन आवश्यक छ । अरुका लागि होइन आफ्नो लागि अनुशासित भएर सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । दैनिकी रुपमा यसलाई व्यवहारमा लागू गरेर अनुशासित भएर स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सुझाव दिन्छु ।
घरमै बसेर कसरी दिन बिताउन सकिन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा मान्छेलाई मानसिक स्वास्थ्य एकदमै आवश्यक छ । त्यसकारण घरमा जे गर्दा खुशी मिल्छ त्यही काम गर्न सकिन्छ । घरमै बसेर उत्पादनमूलक र सिर्जनात्मक काम गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तैः पुस्तकहरु पढ्ने, फिल्म हेर्ने, गीत सुन्ने, परिवारसँग रमाइलो गेरेर समय बिताउने ।
#गायक महेश काफ्ले